လက္ကား SND-G10 အဝါရောင် RVD ကျိန်သောစိန်အမှုန့်ဗဓေလသစ်ဘိုင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း | SinoDiam
SND-G10 ၏ 2. အက္ခရာ
အဝါရောင်အရောင်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံသဏ္withာန်ဖြင့်မမှန်ပုံသဏ္,ာန်၊ ကြွေပြားကပ်ခြင်း၊ အစေးကပ်ခြင်းနှင့် electroplating ထုတ်ကုန်များအားလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျောက်၊ သတ္တုစပ်၊ သံလိုက်ပစ္စည်းများ၊ သဘာ ၀ စိန်၊
3. Crushed Diamond Powder အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
SND-G05 50 / 60-325 / 400 SND-G10 30 / 35-325 / 400 SND-G15 30 / 35-325 / 400
နှင့် electroplating အမျိုးမျိုး
ထုတ်ကုန် electroplating ၏, လုပ်နိုင်တဲ့
ကာဗိုက်၊ ဖန်၊ ကြွေထည်မြေထည်၊ ကျောက်တုံးများပေါ်တွင်အကြီးအကျယ်အသုံးပြုသောလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည်
နှင့်အခြား Non- သတ္တုပစ္စည်းများ။
4. ရရှိနိုင် Grit အရွယ်အစား
၃၀/၅၀ ၅၀/၈၀ 80/100 100/120 120/140 140/170 170/200 200/230 230/270 270/325 325/400
SND-G05 X √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G10 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
SND-G15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
၅ ။ အခြားအဆင့်နှင့်ကွက်အရွယ်အစားစိန်
ရှေ့သို့ SND-G05 စိမ်းလန်းသော RVD မှစိန်ပွင့်အားအဆင့်အတန်းဒြပ်စိန်အမှုန့်ကိုကျိန်ဆဲသည်
နောက်တစ်ခု: ကွန်ကရစ်နှင့်ကတ္တရာကြိတ်စက်များအတွက် Polycrystalline Diamond Compact PDC Cutter